टिकटक स्टार स्मारिकाको डिभोर्स, लाइभमा आएर पूर्वपतिले गरे यस्तो आग्रह - टि. एल. एन पोस्ट
Home फिल्म सेलिब्रेटी टिकटक स्टार स्मारिकाको डिभोर्स, लाइभमा आएर पूर्वपतिले गरे यस्तो आग्रह
‘नाम र पैसा कमाएपछि श्रीमानलाई छोडिस भन्ने जुन आरोप लगाइएको छ, त्यो बिलकुल गलत हो,’ उनले भने, ‘यस्तो गलत आरोप लगाउन बन्द गरिदिनुहोला ।’
‘म कुनै सेलिब्रिटी नभएर आम मान्छे हुँ । मिडियामा आएर बोल्न मन पनि थिएन । तर, स्मारिका र मेरो सम्बन्धको विषयमा धेरै जनाले जिज्ञासा राख्नुभयो ।
अहिले पनि एक–अर्कालाई घृणा गर्दैनांै । उसको पनि करिअर राम्रो होस । भविष्य राम्रो होस । उसले पनि मेरो विषयमा यही चाहन्छ होला सायद । उसलाई कुनै ब्लेम नलगाइदिनुस ।
Previous articleकक्षा १२ को परीक्षा दशै अगाडी नै गर्ने बोर्डको तयारी
Next articleकिन भासिरहन्छ पोखरा ?
आज ५ सय ८० वर्ष यताकै सबैभन्दा लामो ग्रहण लाग्दै, कति बजेदेखि कति समय लाग्दैछ ?